Ecrebo: Shakhsiyeynta Khibradaada POS | Martech Zone
Ecrebo: Shakhsiyeynta Khibradaada POS
Arbacada, Maarso 1, 2017 Khamiis, Maarso 2, 2017 Douglas Karr
Horumarka tikniyoolajiyadda ayaa siinaya fursado aan caadi ahayn shirkadaha si loo wanaajiyo khibradda macaamiisha. Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed maahan oo kaliya faa'iido u leh ganacsiyada, waxaa ku qanacsan macaamiisha. Waxaan dooneynaa ganacsiyada aan ku soo noqnoqonno inay aqoonsadaan cidda aan nahay, oo ay nagu abaal mariyaan shaqadeena, oo ay talo naga siiyaan marka safarka wax iibsigu socdo.
Mid ka mid ah fursadaha noocaas ah ayaa loo yeeraa Suuqgeynta POS. POS waxay u taagan tahay Goobta Iibinta, waana qalabka ay dukaamada tafaariiqdu u adeegsadaan inay kugu hubiyaan. Maaha wax aan caadi ahayn in shirkaduhu yeeshaan nidaamyo daacadnimo iyo kaarar qiimo dhimis ah si ay ula socdaan waxyaabaha ay u iibsanayaan macaamiisha often laakiin xogta badanaa waa la soo ururiyaa oo mar dambe ayaa loo adeegsadaa si loogu suuq geeyo iyaga ama emayl ama waraaq toos ah.
Kawaran haddii aad si dhakhso leh u heli karto xogta macaamiisha oo aad si toos ah ula xiriirto marka la joogo kormeerka? Tani waa fursadda POS Marketing.
Ecrebo waa barta suuqgeynta suuqgeynta iibinta u oggolaaneysa dukaamada inay u soo bandhigaan dalabyo bartilmaameed u ah macaamiisha goobta wax iibsiga oo ay weheliso risiidhkooda ama rasiidhka dijitaalka ah. Iyadoo in ka badan 90% macaamil ganacsi oo ka dhacaya dukaanka, Teknolojiyadda POS-ka ee Ecrebo ku saleysan waxay awood u siineysaa dukaamada inay u keenaan isgaarsiinta suuqgeynta bartilmaameedka u gaar ah macaamiil kasta.
Macaamiisha ayaa ka faa'iideysanaya helitaanka dalabyo iyo dhiirrigelinno ku habboon oo loo dhiibo hab ku habboon oo aan loo baahnayn. Ecrebo awooda dhibic ee suuqgeynta iibinta ee loogu talagalay noocyada hogaaminaya oo ay ku jiraan Sugrose (raashinka), M&S (dukaanka waaxda) iyo Pandora (dahabka).
Astaamaha Suuqgeynta Ecrebo POS
Kuuboonada Beegsiga ee Bartilmaameedka U keen si heer sare ah oo khuseeya, dalabyo ku saleysan iibsi iyo fariimo toos ah macaamiisha dukaanka. Wadid kordhinta iibka kororka, kobcinta iibka noocyada kala duwan, iyo kobcinta daacadnimada macaamiisha.
Rasiidhada Dijital ah ee Shaqsiga ah - U sii macaamiishaada hab ku habboon oo ay ku helaan kuna kaydiso risiidhadooda. Rasiidhada dhijitaalka ah waxay sare u qaadaan waayo-aragnimada macaamiisha waxayna furaan kanaalka suuqgeynta iibsiga kadib.
Pandora, mid ka mid ah noocyada dahabka adduunka ugu waaweyn, ayaa hadda adeegsanaya Ecrebo si ay u keento rasiidhada dhijitaalka ah ee guud ahaan 220-xoog leh ee dukaanka UK. Rasiidhada ayaa loo soo diray emayl macaamiisha ka dib macaamilkooda waxayna ku jiraan ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo lagu helo joornaalada caadiga ah, iyo sidoo kale codsi ku saabsan jawaab celinta macaamiisha, taas oo u oggolaanaysa dadka wax iibsanaya inay ka faaloodaan khibradooda dukaanka.
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa rasiidka dijitaalka ah fursad aan kaga codsan karno jawaab celinta macaamiisheenna waaya-aragnimadooda dukaanka, taasoo noo suurta gelineysa inaan si joogto ah u wanaajinno dalabkeena. Jo Glynn-Smith, VP ee Suuqgeynta, PANDORA UK
Ecrebo xogta ayaa dib loogu quudiyaa maareeyayaasha bakhaarka iyo xafiiska guud ee PANDORA UK si ay uga caawiso shirkadda inay fahamto sida ay dukaammadoodu u shaqeynayaan iyo sidoo kale inay aqoonsadaan aagag kasta oo lagu horumarin karo.
Tags: Baadhidkuuboonada wax lagu iibsadorasiidhecreboM&SPandorashakhsi ahaaneedshakhsi ahaaneedrasiidhada shaqsiga ahdhibic iib ahbarta iibka iibkabarta iibkaPOSSugrose
Vision6 waxay iskuxidhaa Eventbrite casuumaadaha iyo Maareynta-Liiska Martida
Zencastr: Si fudud ugu duub Wareysiyadaada Podcast khadka tooska ah